Soritr'aretina pharyngitis | Bezzia
Tony Torres | 09/06/2021 23:55 | aretina
Pharyngitis, tenda tenda, na tonsillitis? Na dia ireo teny ireo dia matetika ampiasaina ankolaka Mba hanehoana izany zavatra izany dia ny tena marina dia samy hafa be ireo olana ireo. Ny tenda dia mety maratra vokatry ny viriosy iray, izay miteraka fivontosana manodidina ny taonina, fa tsy ny amandony mihitsy. Rehefa mitranga izany dia ny tonsillitis manokana no mety hiteraka antony maro samihafa.
Fa rehefa misy pharyngitis, ny tena mitranga dia ny fivontosana ny pharynx. Mitranga io fivontosana io vokatry ny aretina mikraoba. Io areti-mifindra io dia miteraka fivontosana mahery amin'ny tonony, ary koa amin'ny faritra misy tenda iray manontolo. Ny pharyngitis dia miaraka amin'ny fanaintainana, tazo, fahasarotana mitelina, ary tsy fahazoana aina izay matetika maharitra mandritra ny herinandro.
1 Inona avy ireo soritr'aretin'ny pharyngitis
1.1 Fitsaboana ny pharyngitis
1.2 Sakano ny pharyngitis
Inona avy ireo soritr'aretin'ny pharyngitis
Miatrika tenda maharary tampoka, tena ilaina ny mandray fepetra fisorohana mba hisorohana ny vokany lehibe kokoa. Na izany aza, rehefa misy aretina mikraoba dia sarotra be ny misoroka ny fisehoan-javatra tsy hita isaky ny tranga. Mba hahafahana mamantatra pharyngitis mety hitranga dia tsara kokoa ny manatona ny biraon'ny dokotera mba ho fanampin'ny diagnostika, manomeza antibiotika izay manadio ny aretina.
Ireo no famantarana ny pharyngitis izay afaka manampy anao hanavaka ny tenda indraindray maharary amin'ny aretina izay mitaky fitsaboana zava-mahadomelina.
Vavony tenda: Ny tenda tenda io no famantarana lehibe indrindra sy miharihary indrindra amin'ny pharyngitis. Azonao atao ny mahatsikaritra aptsindry mafy manaraka ny tendanao, amin'ny faritra afovoany manodidina ny amandony.
Tily mibontsina: Rehefa misy mamaivay ny pharynx dia mety hisy fiantraikany amin'ny tonony izany ary ho voadona mafy. Inona manakana ny mitelina ara-dalàna, miteraka fanaintainana mafy na dia fihetsika tsotra mitelina rora aza.
tazo: Ny areti-mifindra dia mety hiteraka tazo, ary koa ny malaise amin'ny ankapobeny, fanaintainana hozatra sy fahalemena. Ireo soritr'aretina ireo dia mitovy amin'ny an'ny gripa.
Teboka lymph mivonto ao amin'ny tendany: Ny lymph node ao amin'ny hatoka dia hita ao amin'ny valanorano ambany, mifatotra amin'ny vozona sy pharynx. Raha misy dikany lehibe ilay aretina, dia mety ho nivonto be izany lasa hitan'ny maso mitanjaka.
Fitsaboana ny pharyngitis
Ny fomba tokana mahomby amin'ny fitsaboana pharyngitis dia ny fitsidihana ny dokotera. Ilaina tokoa ny famakafakan'ny manam-pahaizana manokana ny antony mahatonga ny pharyngitis, ary koa ny hamafiny, mba hanomezana fitsaboana sahaza azy. Satria ny mety tsy fanasitranana tsara an'io olana io dia mety hitarika amin'ny pharyngitis mitaiza. Ny fitsaboana dia afaka mandalo ny fihinanana antibiotika manokana, ary koa fanalana fanaintainana.
Ilaina ihany koa ny fihinanana tsiranoka avo lenta satria ny tazo dia mety hiteraka tsy fahampiana rano. Ho fanampin'izany, tsy maintsy ampiana fa ny fahasarotana amin'ny fitelina dia mahatonga anao tsy afaka mihinana sakafo matanjaka mandritra ny andro vitsivitsy. Noho izany, ny fanjifana sakafo mafana ranoka, broths tena mahavelona, ​​ranom-boankazo feno vitamina ary mazava ho azy, rano be.
Ny fitsaharana dia ampahany lehibe amin'ny fanarenana, satria io fomba io dia afaka manamafy ny hery fiarovan'ny vatana raha miady amin'ny aretina. Azonao atao ihany koa ny manampy ny tendanao ho sitrana amin'ny alalàn'ny rano sy soda. Miezaha miala sasatra araka izay tratranao, aza miteny mba tsy hampahatezitra ny tenda intsony ary avela ho sitrana tanteraka alohan'ny hiverenany amin'ny hetsika fanaonao mahazatra.
Sakano ny pharyngitis
Tsy mahazo ny fitsaboana sahaza azy amin'ny tranga tsirairay, afaka mahatonga ny pharyngitis hitarika olana lehibe toy ny aretin-tsofina na sinusitis. Zava-dehibe tokoa ny fanarahana ny tolo-kevitr'ilay manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana. Ankoatry ny fandraisana ny fepetra fisorohana ilaina, izay anisany ny fahadiovan'ny tanana, ny fisorohana zava-pisotro mangatsiaka be na fiarovana ny hatoka amin'ny tontolo tena faran'izay mafy.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia azo sorohina ny aretin-tenda, mitandrina mialoha. Ilaina ny miala amin'ny olona izay mampiseho soritr'aretin'ny pharyngitis, noho izany, raha manan-janaka ianao ao an-trano dia tokony ho azonao antoka fa tsy hanakaiky loatra izy ireo hanakanana azy ireo tsy ho voan'ny aretina. Ny fampiasana sarontava, ary koa ny fahadiovana amin'ny tanana tsara dia hanampy anao hiaro ny fianakavianao amin'ireo sy ireo viriosy hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » aretina » Sintona amin'ny pharyngitis